Ahoana ny fametrahana adblock amin'ny Chrome ho an'ny Android | Androidsis
Ahoana ny fametrahana adblock amin'ny Chrome ho an'ny Android
Ignatius Room | | Nohavaozina tamin'ny 05/04/2021 00:35 | Fampiharana Android, Tutorials
Na eo aza ny zava-misy fa Google no orinasan-doka lehibe indrindra eto an-tany, dia misy a Mpanakana doka ho an'ny Chrome amin'ny Android. Mazava ho azy, tsy manakana karazana dokam-barotra izany, satria mety hitora-bato amin'ny tampon-tranony izy io. Ny zavatra ataony dia ny manakana ireo doka manelingelina indrindra, ireo izay manery antsika hifanerasera amin'izy ireo mba hidirana amin'ny pejin-tranonkala.
Araka ny fampiharana hanakanana doka Nanjary malaza izy ireo, ny fomba fampisehoana doka koa dia nanao an'io. Na eo aza ny zava-misy fa ny Adwords no sehatra dokam-barotra fampiasa indrindra eto amin'izao tontolo izao hanaovana dokam-barotra, dia ny famoahana doka fotsiny ihany, fa tsy mba aseho amin'ny fomba iray na hafa, na tsy dia mampiditra.
1 Inona ny mpanakana doka Google
2 Karazan-doka manao ahoana no sakanan'ny mpanakana ny doka Google?
3 Ahoana ny fomba hampiasana ny adblock ao amin'ny Chrome ho an'ny Android
4 Solony amin'ny adblock Chrome
4.2 Samsung Internet Browser
5 Sakano ny dokam-barotra rehetra amin'ny Android
Inona ny mpanakana doka Google
Google dia nanambara tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 fa nahitana mpanakana doka ao amin'ny Chrome (misy amin'ny sehatra rehetra misy azy io, tsy ho an'ny finday ihany), mpanakana dokambarotra izay tsy manafoana tanteraka ny doka (mety hanimba ny tobin'ny orinasao izany) raha toa ka manakana ireo karazana doka manelingelina indrindra mety ho hitantsika mandritra ny fitetezana Internet.
Ny fandraisana an-tanana an'i Google dia ao anatin'ny Fiaraha-miasa amin'ny doka tsara kokoa, fikambanana iray izay misy koa Facebook (iray amin'ireo orinasan-doka lehibe eran'izao tontolo izao) sy Microsoft (toy ny mpanorina fanta-daza) ary koa World Federation of advertirses, Taboola, News Corp, European Interactive Digital Advertising Alliance, GroupM, NAVER Vondrona ...
Ny iraka an'ity fikambanana ity, araka ny nolazaiko tetsy ambony, dia ny famaranana, indray mandeha ary ho an'ny rehetra, miaraka amin'ny dokambarotra manelingelina izay misy fiatraikany ratsy mankany amin'ny fitetezana ny mpampiasa. Ireo karazana doka ireo dia voasokajy ho:
Doka pop-up. Doka manelingelina izay aseho ary manery antsika hanidy azy ireo hiditra amin'ny tranokala, fantatra ihany koa amin'ny hoe pop-up windows.
dokam-barotra Manan-toerana. Doka izay aseho alohan'ny hametrahana ny atin'ny pejy iray ary manery antsika hanindry azy io hahazoana ny atiny.
Anuncios mibodo mihoatra ny 30% amin'ny efijery. Ireo doka rehetra mibodo mihoatra ny 30% amin'ny efijery finday avoakanay dia ho voasakana.
Doka manova loko haingana hisarika ny sain'ny mpamaky.
Doka izay milalao horonan-tsary misy feo mandeha ho azy. Iray amin'ireo endrika maharikoriko indrindra izay hitantsika ny fizahana.
Doka misy isa isa. Mila miandry ny fanisam-bahoaka isika ary manindry bokotra iray hidirana amin'ny pejin-tranonkala.
Doka izay aseho mandritra ny fisidinanay tranonkala.
Doka halefa. Doka izay aseho amin'ny fotoana rehetra ary tsy azontsika esorina amin'ny fotoana rehetra izany.
Karazan-doka manao ahoana no sakanan'ny mpanakana ny doka Google?
Mandritra ny fitetezana pejin-tranonkala iray, toy ny Androidsis, dia ho hitanao fa na amin'ny sisiny na eo anelanelan'ny lahatsoratra, doka mifangaro. Ireo karazan-doka ireo no fototry ny doka Google ary mamela ny bilaogy toa an'ity hanana fivelomana ara-toekarena, satria ny fidiram-bolany dia ny dokambarotra.
Ity karazana doka ity dia mety ho lahatsoratra na lahatsoratra misy sary, miankina amin'ny karazana doka noraisin'ny orinasa. IRETO Tsy misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny tranokala, na ny fahafaha-miditra amin'ny atiny, Ka tsy mametraka olana ho an'ny mpampiasa izy ireo mihoatra ny mety sy tsy mety amin'ny fahitana izay toa mitovy amintsika.
Raha tsy misy an'ity base doka ity dia tsy hisy ny 99% amin'ireo bilaogy azonao tsidihana matetika, ka eo an-tananao ny mety hisian'ireo manohy ny fijanonany amin'ny fampiatoana ireo blocker doka karazana adblock, blockers sakano ny karazan-doka rehetra amin'ny doka, tsy ilay manelingelina ihany no kendren'ny Coalition for Better Ads.
Ahoana ny fomba hampiasana ny adblock ao amin'ny Chrome ho an'ny Android
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika mba hanombohana hamehezana ireo dokambarotra manelingelina dia ny fampiatoana ny Blocker pop-up Chrome ho an'ny Android, blocker izay, tsy hay hazavaina, dia kilemaina natoraly.
Rehefa alefa dia tsy afaka ny pejy web tsidihinay alefa tsy misy alalana mankany amin'ny pejin-tranonkala hafa ary koa, tsy hanokatra varavarankely pop-up izy io. Mba hampiasana azy dia tsy maintsy ataonay ireo dingana asehonay anao eto ambany:
Miditra amin'ny fikirakira ny fanahafana an'ny Chrome.
Manaraka, tsindrio eo Fikirana tranokala > Pop-ups sy redirects.
Farany, tsy maintsy manao izany isika alefaso ny switch ka aseho amin'ny volondavenona izy ireo (raha manga izany dia tsy mihetsika).
Raha vantany vao navadikay ny sakana amin'ny pop-ups sy ny redirects, dia hanazava izahay ny fomba hampiasana ny blocker doka an'i Chrome, sakana iray izay tsy mandeha amin'ny laoniny (raha ny tanjon'ity fikambanana ity dia ny hanatsara ny traikefa fitetezana Internet, io asa io dia tokony halefa tsy misy hatak'andro).
Manaraka, tsindrio eo Fikirana tranokala > dokam-barotra.
Manaraka, tsy maintsy alefaso ny switch ka aseho amin'ny volondavenona izy ireo (raha manga izany dia tsy mihetsika).
Solony amin'ny adblock Chrome
Raha tsy tianao ny fomba fiasan'ny adblock an'i Chrome, dia afaka mampiasa browser hafa izahay avelao ny fampiasana ny fanitarana an'ny antoko fahatelo hanakanana ny karazana doka rehetra na izay efa misy mpandika doka amin'ny fomba natoraly.
Miaraka amin'ny salan'isa 4,7 amin'ny 5 azo atao ary mihoatra ny 400.000 naoty, Brave no iray amin'ireo mpitety tranonkala tsara indrindra misy amin'ny Android. Mahereza, tsy mamela antsika b fotsinysakano ny karazana doka (ao anatin'izany ny varavarankely pop-up), fa misy koa ny rafitra manohitra ny fanarahan-dia izay hanampy antsika hisoroka ny pejin-tranonkala tsy hahafantatra fa mitsidika izahay ary amin'izay dia hahafantatra ny zavatra tiantsika, ireo safidintsika, ireo laharam-pahamehana ...
Amin'ny fampidirana blocker doka, ny hafainganam-pandehan'ireo pejy web izay tsidihinay dia haingana dia haingana indroa. Ho fanampin'izany, mamela antsika izy io ahinjiro hatramin'ny adiny 2,5 fanampiny ny fotoana fitetezana miaraka amin'ny fitaovantsika.
Izahay koa dia manana kinova desktop eo am-pelatananay, koa raha te hanomboka hanadino ny momba an'i Chrome mandrakizay izahay, miaraka amin'ny Brave dia afaka manao izany tsy misy olana. Brave Browser no misy anao misintona maimaim-poana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Developer: Rindrambaiko matanjaka
Saingy, raha miresaka momba izany isika mpitety tsara indrindra misy amin'ny Android ankehitriny, tsy maintsy miresaka momba ny Internet Internet Browser i Samsung. Ity browser ity, izay azonao notsoahina dia eo ambanin'ny elo an'ny orinasa Koreana Samsung, dia manana naoty 4,4 kintana ary maherin'ny 3.500.000 tapitrisa naoty.
Inona no mahatonga an'i Samsung Internet Browser ho mpitety tranonkala tsara indrindra? Ny browser an'ny Samsung dia mamela antsika hametraka extensions, iray amin'ireo vitsy (raha tsy izy irery ihany) mamela antsika hanao izany. Noho io fiasa io dia vitantsika apetraka ny Adblock fanta-daza (miampy ny hafa) misy amin'ny sehatra birao rehetra sy iray amin'ireo mpanakan-doka be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
Samsung Internet Browser dia azo alaina maimaim-poana maimaim-poana ary mifanaraka amin'ny telefaona Android rehetra. Ao amin'ny App Store ihany koa misy ny kinova beta an'ny mpitety tranonkala, kinova izay ahafahantsika mizaha maso voalohany ny vaovao tonga hatrany amin'ny kinova farany.
tanto Nahery Fo como el Samsung Internet Browser Izy ireo no mpizahatany roa tsara indrindra izay hitantsika ao amin'ny Play Store izay ahafahantsika manakana ny doka amin'ny pejin-tranonkala izay tsidihinay tsy tapaka. Na eo aza izany, tsy izy ireo ihany.
Afaka mahita fomba hafa mahaliana izay tsy dia fantatra loatra isika tselatra, mpizaha loharanom-baovao misokatra izay manome safidy malalaka ho an'ny fanamboarana, anisan'izany ny mety mamorona whitelists amin'ireo tranonkala izay tsy tianay ho voasakana ny atiny fanaovana doka.
Browser tselatra - Mpijery Internet
Developer: Antony Restaino
Safidy mahaliana hafa, misy ivelan'ny Play Store, no hita ao Blockada, mpizaha loharano misokatra hafa, tranokala manolotra anay fampahalalana feno momba ny fanambarana rehetra fa nanakana izy io raha mbola ampiasainay.
Sakano ny dokam-barotra rehetra amin'ny Android
Adguard dia iray amin'ireo safidy mahaliana azontsika ampiasaina amin'ny Android hanakanana ny doka amin'ny Android. Tsy toy ny mpizaha tany, Adguard dia rindrambaiko iray, ankoatra ny fanakanana ny doka fanaovan-tserasera manakana ny ankamaroan'ny doka azontsika jerena amin'ny rindranasa sy lalao ihany koa.
Tsy mila alalana faka afaka mampiasa ilay application. Azo alaina maimaimpoana ilay fangatahana hizaha toetra ny fizotran'ny fampiharana. Na izany aza, raha te hampiasa azy tsy misy fetra isika dia tsy maintsy mamaky ilay boaty.
Rehefa avy nanandrana ny Adguard aho na amin'ny fitetezana na amin'ny fampiharana isan-karazany izay misy doka, dia tsy maintsy ekeko izany miasa tsaraNa izany aza, misy ny rindranasa sasany izay tsy manakana ny tsy hisian'ny dokam-barotra, ka ity vanim-potoana fitsapana ity dia mety raha jerena raha mifanaraka amin'ny filanao ampiasaina izany.
Ny vidin'ny fangatahana fitaovana 3 dia 1,25 euro isam-bolana, midika izany 15 euros isan-taona, izay mizara roa ny mpinamana 3 dia 5 euro isan-taona, vidiny sarobidy mihoatra izay omeny antsika. Safidy iray hafa ny fifanarahana amin'ny drafitra fiainana, izay ny vidiny ho an'ny fitaovana 3 dia 38 euro ary noho izany dia adinontsika ny mandoa isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fametrahana adblock amin'ny Chrome ho an'ny Android
Bilaxten 20 mg dia hoy izy:
Namela ny tsara indrindra ianao, Firefox android. Azonao atao ny mametraka uBlockOrigin ary manadino ireo doka, voalamina tsara ary manafaka anao amin'ny mpanaraka, ny malware, ny pejy manimba sns…. Efa nandramako daholo izy ireo, tsy ny haingana indrindra fa amin'ny ankapobeny dia io no mety amiko indrindra.
Etsy ankilany, manana ny Samsung Galaxy J6 aho ary rehefa nividy azy dia nanana ny Internet Internet Browser efa napetraka avy amin'ny orinasa, fa tamin'ny fanavaozana ny rafitra vaovao dia nanjavona. Ampidiro indray angamba hahitanao ny fandehany ary hahitana raha azo apetraka ny extensions.
Mamaly an'i Bilaxten 20mg
Ahoana ny fanesorana ireo fampiharana efa napetraka ao amin'ny Android